Etu esi etinye aka na Email na Akaụntụ mmekọrịta | Martech Zone
Ozugbo m hụrụ vesos eji na aha nke edemede na ahia, enwetara m queasy bit. Nke a infographic n'okpuru si Devesh Design na-arụ nnukwu ọrụ nke itinye mkpa ọ dị maka ndị ahịa iji email maka ụlọ ọrụ ha. Enweghị m obi abụọ ọ bụla banyere ike nke email na ọ bụ ikike dị ka a push ahịa teknụzụ kpaliri ndị debanyere aha ime ihe. Ọ na-arụ ọrụ… na onye ọ bụla kwesịrị ime ya.
Agbanyeghị, ntụnyere email na mmekọrịta ọha na eze bụ apụl na oroma. Mgbasa mgbasa ozi nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ karịa ịpị mgbasa ozi ma gbanwee. Mgbasa mgbasa ozi dị egwu n'inweta ozi gị. Ya mere, ka anyị jiri ihe atụ ahụ na infographic dị n'okpuru. Na-ezigara email nke 1,000 nke ndị debanyere aha gị na ya na 202 ndị mmadụ meghere email ahụ na 33 n'ime ha na ịpị ya.
Ugbu a, ka anyị kesaa post ahụ na mgbasa ozi mmekọrịta ebe ị nwere ụmụazụ 1,000 na Twitter na Facebook. Dị ka eserese ahụ, ọ nwere ike ịbụ na mmadụ 10 hụrụ ya n'ezie ma 3 pịa ya. Nke ahụ dị oke egwu ọ bụghị ya?
Mba, odighi egwu. Lee ihe kpatara ya. Ọ bụ mmadụ ole na ole kesara ọdịnaya ndị ị kwalitere site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Mmadụ ole na ole ahụ nwere ihe karịrị ndị na-eso ụzọ 20,000. Ndị na-eso ụzọ ha ruru ihe karịrị 100,000 ụmụazụ. Ndị na-eso ụzọ ha ruru ọtụtụ nde mmadụ. Ọ dịghị onye mepere email gị karịa otu oge na ọ dị obere na onye ọ bụla zigara enyi ya email ahụ. Mana ọrụ mmekọrịta na-aga n'ihu ruo ọtụtụ ọnwa.
Anyị nwere posts na Martech Zone nke ahụ ka na-enweta ọtụtụ puku echiche na ọtụtụ narị clicks ọtụtụ afọ mgbe anyị dechara ha ekele maka mgbasa ozi mmekọrịta. Ghara ikwu na mbido mmekọrịta ndị ahụ dugara ndị ọzọ na-ede edemede ma na-ezo aka na anyị, nke dugara n'ọfụma njin ọchụchọ, nke dugara ahịa ọchụchọ ọchụchọ ka elu, nke dugara na ịpịkwu na ntụgharị.
Ọ bụ nnukwu infographic na-akwado ndị ike email. Mana iwelata mgbasa ozi mmekọrịta bụ nnukwu ndudue maka nzukọ ọ bụla. Anyị anaghị ekwu maka mmetụta gafere pịa na ntụgharị. Ọha na eze na-enye ohere iji wuo ikike na anya ọha, iji nweta mgbasa ozi dị ịtụnanya site na nnukwu ọrụ ndị ahịa, yana ozi oge izi ezi nke email na-efu ụgbọ mmiri kpamkpam.
Tags: Devesh Kerentinye aka na emailemail na-elekọta mmadụihe ntinye mmaduvesos